Khabiirka Kala Duwan: Shabakadda Websaytiyaha - Talo Sare
Qalabka saxda ah ayaa fududeyn kara si aad ugu fiicneysid goobtaada SEO iyo waxay xajisaa tiro aad u tiro badan oo xog ah. Mid ka mid ah qalab sida SEO Tool Spider Tool. Barnaamijkani wuxuu kaa caawinayaa dib u eegista goobta iyo cadeeynaya ciladaha khatarta ku ah raadinta mashiinka raadinta. Codsigan kumbuyuutarka oo yar ayaa si sahlan loo soo ceshan karaa loona rakibi karaa gudaha kombiyuutarkaaga gaarka ah, qalabka Linux ama Mac. Waxay raadineysaa oo falanqeyn doontaa xiriirinta boggaaga, sawirrada, CSS faylasha iyo macluumaad kale ujeedooyinka SEO - linux hosting panel. Waxay sidoo kale xisaabin doontaa bartaada internetka ama boggaaga, in la badbaadiyo shaqada shaqada iyo wakhtiga, sababtoo ah falanqaynta gacanta waxay qaadan kartaa maalmo badan waxayna noqon kartaa mid caqabad ku ah qof kasta.
1. Download iyo Install:
SEO Spider Tool waxaa loo heli karaa Mac, Linux, Ubuntu, iyo Windows oo dhan waa bilaash. Si kastaba ha ahaatee, nooca bilaashka ah wuxuu ku yimaadaa muuqaalada xadidan, iyo iibsashada liisan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto URL dheeraad ah si loo dhejiyo loona falanqeeyo. Waxay faa'iido u leedahay bogagga asaasiga ah iyo kuwa sare iyo kuwa ugu fiican ee kuwa aan barnaamijka ahayn. Waxaad isla markiiba ka soo bixi kartaa freeware-ka Google Play Store ama dukaanka internetka oo kale oo isku mid ah oo aad ku rakibi karto.
2. Goobta ama soo saar Website:
Marka la soo dajiyo oo la rakibo, talaabada xigta waa in la geliyo cinwaanka sanduuqa raadinta ee ujeeddooyinka udoonaya. Marka hore, waa inaad gashaa URL-ka iyo weheliso HTTP ama https code iyo guji badhanka Start..Haddii aad xiiseyneyso inaad ku-soo-mariso domains dheeraad ah, waxaad ubaahantahay inaad ku dhaqaaqdid Qeybta Dhamaan Dhibaatooyinka Subdomains ee hoos yimaada Qaab-Hawleed> qashir-qaade. Iyada oo ku saleysan xajmigaaga goobta, nidaamka taranka iyo soo saaridda waxay qaadan kartaa laba daqiiqo.
3. Hubi Redirects:
Waa inaad bilowdaa inaad eegto dhammaan khidmooyinka khaladaadka suurtagalka ah oo aad ka saartid sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si barnaamijkani u sii wado shaqeyn la'aan iyadoon wax arrin ah. Dib-u-xajinta ugu weyn waa 301 iyo 302. Sidaa awgeed, waxaad sidoo kale ku iman doontaa qaladaadka 404 iyo 505 kuwaas oo soo baxaya markaad booqato boggaga aan dhab ahaantii jirin.
Iyada oo SEO Spider Tool, waxaad falanqeyn kartaa dhammaan URL-yada iyo soo saar qoraal ama sawirro faa'iido leh oo ku salaysan shuruudahaaga. Waxyaalahaas oo dhan waxay ku kaydsan yihiin guddiga URL. Hubi inaad eegtay dhererka URL adoo kala soocaya xayndaabyadiisa, waana inaad fiirisaa dhammaan shaandhada loogu talagalay astaamaha ASCII, hoos-u-dhac, gogoldhig, mawduucyo kala duwan iyo jawaabo firfircoon ama URL.
5. Qaybaha bogga:
Marka xigta, qalabkan ayaa kaa caawin doona inaad eegto cinwaanada bogga. Hubso in dhammaan boggagaagu leeyahay cinwaan khaas ah si barnaamijkani u xoqo macluumaadka faa'iido leh adigoon wax arin ah lahayn. Sidoo kale waa inaad gashaa leyliga muhiimka ah ee cinwaanka bogga si falanqeyntu u bilowdo isla markaaba isla markaana khaladaadka oo dhan si toos ah u go'an.
6. Xidhiidhka XML:
Waxaad isticmaali kartaa Qalabka Spider Spider Tool si loo abuuro Xogta XML. Noocyada noocaas ah waxaa isticmaala Google, Bing, iyo Yahoo si ay u kallifaan content content. Qorshe hawleedka ayaa ka caawin doona makiinadaha raadinta raadinta ama soo saaro boggaaga iyada oo aan wax dhibaato ah. Waxaad si sahlan u bedeli kartaa muuqaalkan oo aad bedeli kartaa inta jeer ee bogagga qaar ku saleysan shuruudahaaga.